सन् २०१८ को फिफा विश्वकपमा जिरू राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै
ओलिभिए जोनातँ जिरू
(१९८६-०९-३०) ३० सेप्टेम्बर १९८६ (उमेर ३५)
ग्रनोब्ल फुत ३८
ग्रनोब्ल फुत ३८ २३ (२)
→ इस्त्र (ऋण) २२ (१४)
तुर ४४ (२४)
मोन्तपेलिए ७३ (३३)
→ तुर (ऋण) १७ (६)
आर्सनल १८० (७३)
चेल्सी ७५ (१७)
एसी मिलान ७ (४)
फ्रान्स ११० (४६)
उप-विजेता सन् २०१६ फ्रान्स
बरिष्ठ फुटबल क्लबमा उपस्थिति तथा खेल्दा गरेको गोल (गोललाई घरेलु लिगमा गरेको गनिनेछ) नवीनतम जानकारी १९:०४, २६ सेप्टेम्बर २०२० (युटिसी).
† राष्ट्रिय टोलीमा उपस्थिति तथा खेल्दा गरेको गोलहरूको नवीनतम जानकारी २०:५८, ११ अक्टोबर २०२० (युटिसी)
ओलिभिए जिरू (फ्रान्सेली: ɔlivje ʒiʁu); जन्म ३० सेप्टेम्बर १९८६ एक फ्रान्सेली व्यावसायिक फुटबल खेलाडी हुन् । उनी क्लब एसी मिलान र फ्रान्स राष्ट्रिय फुटबल टिमको लागि खेल्ने गर्दछन् । उनी अग्रपङ्क्तिको रूपमा मैदानमा उत्रने गर्दछन् ।
सन् २००८ मा तुर फुटबल क्लबमा सम्मिलित हुनुभन्दा अगावै उनले लिग २ खेल्ने क्लब, ग्रनोब्लेबाटआफ्नो आधिकारिक फुटबल कार्यकाल शुरू गरेका थिए । तुरमा आवद्ध रहेकै समय उनले आफ्नो दोस्रो संस्करणमा २१ गोलका साथ सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए । जसको फलस्वरूप उनी फ्रान्सको सबभन्दा माथिल्लो श्रेणीको फुटबल लिग, लिग अँ को फुटबल क्लब मोन्टेपिलरमा आवद्ध हुने मौका पाए । जिरू सन् २०१० मा अङ्ग्रेजी प्रिमियर लिगको फुटबल क्लब आर्सनलमा आवद्ध हुनु अघि, लिग अँ को संस्करण २०११-२०१२ मा २१ गोलका साथ पुन सर्वाधिक गोलकर्ता बने, जसले गर्दा उनले खेल्ने क्लब मोन्टेपिलरले आफ्नो पहिलो लिग अँ को उपाधि हात पारेको थियो । जिरूले सन् २०१४, २०१५ र २०१७ को एफए कप आर्सनलबाट जितेका थिए । आर्सनल क्लबबाट उनले कुल २५३ खेल खेलेर जम्मा १०५ गोल गरेका थिए । सन् २०१८ जनवरीमा १८ महिनाको सम्झौतामा जिरू आर्सनल क्लबबाट चेल्सीका लागि ऋणमा आवद्ध भएका थिए ।
सन् २०११ देखि उनी फ्रान्सका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुँदै आइरहेका छन् । उनले फ्रान्स राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि ८० भन्दा बढी उपस्थिति जनाइसकेका छन् भने ३० भन्दा बढी गोल समेत गरिसकेका छन् । युइएफए युरो २०१२ र २०१४ फिफा विश्वकपमा क्वार्टर-फाइनलमा पुग्ने फ्रान्स फुटबल टोलीका एक महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा उनले आफुलाई उभ्याएका थिए । युइएफए युरो २०१६ मा फ्रान्सेली टिम फाइनलसम्म पुगेर दोस्रो हुदाँ उनको भूमिका निकै प्रसंशानीय रहन पुग्यो साथै उनी प्रतियोगिताको दोस्रो सर्वाधिक गोलकर्ता बनेर ब्रोन्ज बुट प्राप्त गर्न सफल भए । फ्रान्स राष्ट्रिय फुटबल टिमले २०१८ फिफा विश्वकपको उपाधि हात पार्दा समेत उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो ।
२.२ इस्त्र एफसी (ऋणमा)
२.५.१ २०१२–१३ संस्करण
२.५.२ २०१३–१४ संस्करण
२.५.३ २०१४–१५ संस्करण
२.५.४ २०१५–१६ संस्करण
२.५.५ २०१६-२०१७ संस्करण
६ खेलजीवन तथ्याङ्क
जिरूको जन्म सन् १९८६ सेप्टेम्बर ३० फ्रान्सको चामबेरीमा भएको थियो र उनी ग्रनोब्लेमा हुर्केका थिए । जिरू आफ्ना दुवै हजुरआमाको तर्फबाट इटालियन मुलका हुन् । जिरूले आफ्नो फुटबल जीवनको सुरुवात आफ्नै गृहनगरको क्लबमा खेल्दै गरेका थिए । उनले ६ वर्षको फुटबल प्रशिक्षण पछि १३ वर्षको उमेरमा व्यावसायिक फुटबल खेल्नका लागि ग्रनोब्ले फुटबल क्लबमा आवद्ध भएका थिए ।
२१ वर्षको उमेरमा पहिलो व्यावसायिक क्लबमा आवद्ध हुनु अघि जिरूले ५ वर्ष ग्रनोब्ले युथ एकेडेमीमा प्रशिक्षण लिएका थिए । खेलाडीको रूपमा व्यावसायिक फुटबल क्लबसँग अनुबन्धनले उनको खेल विकासमा एक महत्त्वपूर्ण भाग भएको कुरा उनले पछि स्वीकारेका थिए । त्यसै समय उनले 'यसले मेरो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा मेरो क्षमताको बारेमा जानकारी गराउन मद्दत गर्नेछ' भन्ने कुरा बताएका थिए । २००५-०६ को संस्करण पछि उनलाई क्लबको सुरक्षित टिममा राखिएको थियो जसले फ्रान्सको पाँचौ तहको लिग खेलिरहेको थियो । जिरूले सो लिगमा खेलेका १५ खेलहरूमा १५ गोल गर्दै टोलीमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा आफुलाई स्थापित गरेका थिए । उनको स्थायी प्रदर्शनले गर्दा टिमको नयाँ प्रबन्धक पेटन प्युलेक्वेन र निकोला माल्ग्रीले उनलाई वरिष्ठ टिमको लागि पदोन्नति गरी २२ नम्बरको जर्सी प्रदान गरेका थिए । सन् २००७ फेब्रुअरी २६ मा, जिरूले फ्रान्सेली फुटबल क्लब ले हाब्रे विरुद्ध अतिरिक्त समयमा आफ्नो पहिलो व्यावसायिक गोल गर्दै टिमलाई विजयी बनाएका थिए ।
इस्त्र एफसी (ऋणमा)[सम्पादन गर्ने]
केही खेलकुद समय कमाउने प्रयासमा जिरूले सन् २००७-०८ संस्करणमा इस्त्र एफसीको लागि ऋणमा आवद्ध भए । उनले आफ्नो विकास एक स्ट्राइकरको रूपमा जारी राखे र उनको दोस्रो खेलमा क्लबको साथमा लेवललाई २-१ ले पराजित गरे । त्यसको दई हप्ता पछि, जिरूले भेनेस र क्रिटेल विरुद्ध गोल गरे । उनले अर्लस-एभिगनन विरुद्ध दुई गोल गरे जुन खेल २-० को गोल अन्तरमा समाप्त भएको थियोे र त्यसको १५ दिन पछि, जिरूले पाउ फुटबल क्लबको बिरुद्धमा फेरि दुई गोल गरे र यो समयमा ३-२ को गोल अन्तरले इस्त्र फुटबल क्लब खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो । उनले इस्त्रको लागि १४ गोल गरेका थिए ।
जिरू २०१० मा तुरको लागि खेल्दै ।
सन् २८ मे २००८ मा जिरूले लिग २ को क्लब तुरको लागि ३ वर्षको सम्भैता गरे । उनेलाई १२ नम्बरको जर्सि दिईयो र चोटको कारण तुरका आवद्ध भएको ५ महिना पझि उनले सन् २००८ सेप्टेम्बर ३ मा आफ्नो पहिलो खेल खेले । उनको टर्सबाट रहेको पहिलो खेलमा तुरले बोलग्नेलाई कोप्ले डी ला लिगमा २-१ गोल अन्तरले हराएको थियो । त्यसको एक महिना पछि, उनले क्लबको लागि आफ्नो पहिलो गोल गरेका थिए । उनले तुर क्लबको लागि आफ्नो क्लब कार्यकाल भरी जम्मा २४ गोल गरेका छन् ।
२०१२–१३ संस्करण[सम्पादन गर्ने]
२०१३–१४ संस्करण[सम्पादन गर्ने]
मेसुट ओजल र जिरू २०१३ मा
जिरूले एस्टन भिल्ला विरुद्ध २०१३-१४ प्रिमियर लिग संस्करणको उद्घाटन खेलमा गोल गरेका थिए, तर उनको क्लब आर्सनलले भने उक्त खेलमा ३-१ को हार बेहोर्नु परेको थियो । १ सेप्टेम्बरमा, उत्तर लन्डनकोमा टोटन्ह्याम हटस्पर विरुद्धको खेलमा उनको मात्र गोल रहेको थियो । २६ अक्टोबरमा, आर्सनलले क्रिस्टल प्यालेसलाई २-० को गोल अन्तरले पराजित गर्दा जिरूले संस्करणको दोस्रो गोल गरेका गिए, जो प्रीमियर लिगको शीर्ष स्थानमा आर्सनललाई राख्नका निम्ति सफल साबित भएको खेल थियो । त्यसको लगभग एक महिना पछि आर्सनलले साउथ ह्यामटनलाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दा जिरूले महत्त्वपूर्ण दुबै दुई गोल गरेका थिए ।
२०१४–१५ संस्करण[सम्पादन गर्ने]
२०१४ एफए कम्युनिटी शिल्ड को खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्ध आर्सनलले ३-० को जित दर्ता गर्दा जिरूले तेस्रो गोल गरेका थिए । सन् ३० सेप्टेम्बर २०१४ उनको २८ औँ जन्मदिनका दिन, जिरूले आर्सनलमा पुन नयाँ अनुबन्धन हस्ताक्षर गरे, उनले २०१८ सम्म क्लबमा रहने गरी £ ८०,००० सम्म आफ्नो साप्ताहिक ज्याला बढाएर सम्झौता गरेका थिए ।
२०१५–१६ संस्करण[सम्पादन गर्ने]
जिरूले ओजिलको पासको सदुपयोग गर्दै क्रिस्टल प्यालेसको बिरुद्ध आर्सनलको लागि संस्करणको पहिलो गोल गरेका थिए । सन् २०१६ मे ८ मा जिरूले म्यानचेस्टर सिटीको बिरुद्ध गोल गरेका थिए तर त्यो खेल २-२ गोलमा समाप्त भएको थियो । एक हप्ता पछि २०१५-१६ संस्करणको अन्तिम खेलमा जिरूले एस्टन भिल्ला विरुद्ध ह्याटि्रक परा गरेका थिए, प्रिमियर लिगको संस्करण २०१५-१६ मा उनले १६ गोल गरेका थिए ।
२०१६-२०१७ संस्करण[सम्पादन गर्ने]
२०१६-२०१७ प्रिमियर लिग संस्करणमा जिरूले आर्सनलको पहिलो नौ खेलहरूमा मात्र तीन पटक खेलेका थिए । सन् २९ अक्टोबर २०१६ का दिन प्रिमियर लिग को म्याच डेडमा १० औँ खेलको मा ६९ औँ मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका जिरूले उक्त खेलमा २ गोल गरेका थिए । सन्डरल्याण्ड विरूद्वको उक्त खेलमा आर्सनल ४-१ गोल अन्तरले विजयी हुन सफल भएको थियो ।
सन् ३१ जनवरी २०१८ मा, जिरूले अज्ञात शुल्कको लागि चेल्सीसँग १८ महिना सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले प्रिमियर लिग शुरु भएको ५ दिन पछि चेल्सीका लागि पहिलो खेल वाटफोर्डको बिरुद्धमा खेलेका थिए । जहाँ उनी पेड्रोको स्थानमा ६४ औँ मिनेटमा आएका थिए । यद्यपि, परिणाम ४-१ को गोल अन्तरमा वाटफोर्डले जितेको थियोे । उनले एफए कपमा चेल्सीको तर्फबाट पहिलो गोल हल सिटीको बिरुद्धमा गरेका थिए जसमा चेल्सी ४-० को गृह जित हात पारेको थियोे । । १३ फेब्रुअरी मा जिरूले चेल्सीका लागि आफ्नो पहिलो खेल खेलेका थिए । उक्त खेलमा एडन हजर्डको सहायतामा क्लब ३-० गोल अन्तरले विजयी भएको थियो ।
सन् ८ नोभेम्बर २०१८ मा, जिरूले संस्करणको आफ्नो पहिलो गोल गर्न सफल भएका थिए । उनले २०१८-१९ युइएफए युरोपा लिग समूह चरण अन्तरर्गतको चौथो खेल मा बिएटीई बोरीसोभ विरूद्धको खेलमा गोल गरेका थिए । उक्त खेल पछि चेल्सी उक्त प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो । यस्तै २४ नोभेम्बरमा जीरूले प्रिमियर लिगमा पनि टोटनह्याम हस्टपर विरूद्ध पहिलो गोल गरेका थिए । उक्त खेलमा भने चेल्सी टोटनह्याम सँग ३-१ गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्नु भन्दा पहिले जिरूले राष्ट्रिय युवा टोलीको साथ कुनै पनि उपस्थिती जनाएका थिएनन् । सन् २००१ मा उनलाई राष्ट्रिय यू-१६ टोलीको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि तालिम कार्यशालामा बोलाइएको थियो तर युवा टोलीमा बरिस्ठ युवा खेलाडी योहान कबाय र यान गार्कुफ थिए भने टोलीको प्रशिक्षकको रूपमा पेरी मेनकवास्की रहेका थिए । त्यसैले पनि उनले उक्त टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका थिएनन् । त्यस कार्यशाला पछि जिरूले २००१-०२ को संस्करण अन्तरालमा पनि खेल्ने मैका पाएका थिएनन् ।
सन् ३ नोभेम्बर २०११ का दिन घरेलु टोली मोन्टेपिलरमा जिरूको प्रस्तुति देखेर राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक लरेन्ट ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा जिरूको नाम खेलाडीको सुचिमा राखेका थिए । जिरूले उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल सन् ११ नोभेम्बर २०११ मा अमेरिकाको विरुद्धमा खेलेका थिए भने सन् १५ नोभेम्बर २०११ मा बेल्जियमको विरुद्धमा खेलेका थिए । जिरूले उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा आफ्नो बाल्य अवस्थाको सपना पूरा भएको छ भनेर सञ्चार माध्यमहरूलाई भनेका थिए । उनिले फ्रान्स राष्ट्रिय टिमबाट पहिलो पटक अमेरिकाका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए । जहाँ उनी अतिरिक्त खेलाडिको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । त्यो खेल फ्रान्सले १-० गोल अन्तरले जितेको थियो । जिरूले बेल्जियमका विरुद्ध पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए तर खेल गोल रहित समाप्त भएको थियो । सन् २९ फेब्रुअरी २०१२ का दिन जिरूले जर्मनीको विरुद्ध उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका थिए जुन खेल २-१ गोल अन्तरमा फ्रान्सले जितेको थियो । त्यस खेलको ३ महिना पछि उनलाई युइएफए युरो २०१२ को फ्रान्सेली फुटबल टिमको अन्तिम खेलाडिहरूको सुचिमा समावेश गरिएको थियो । त्यस घोषणाको दुई दिन अघि जिरूले आइसल्यान्डका विरुद्ध गोल गर्नमा २ सहायता गरेका थिए । 
सन् १६ अक्टोबर, २०१२ मा २०१४ फिफा विश्वकप छनौट खेलमा जिरूले स्पेनका विरुद्ध गोल गर्दै खेललाई १-१ को बराबरीमा पुराएका थिए । त्यस खेलमा उनी अतिरिक्त खेलाडिको रूपमा ८८ ‌औं मिनेटमा मैदान भित्र्यिका थिए । उनले स्पेनको विरुद्धमा गरेका गोलका कारणले र आर्सनलमा देखाएको प्रस्तुतिले उनलाई र उनको आर्सनलका खेलाडी साथी लरेन्ट कोसिल्नीलाई १४ नोभेम्बरमा इटालीका विरुद्धमा खेल्नका लागि डाकिएको थियो ।  त्यस खेलमा जिरूले निकै थोरै गोल गर्ने मौका पाएका थिए र उनलाई अर्का अतिरिक्त खेलाडीसँग साटिएको थियो । सन् ११ अक्टोबर २०११ का दिन जिरूले अष्ट्रेलियाका विरुद्ध २ गोल गर्दै खेलका उत्कृष्ट खेलाडि घोषित भएका थिए जुन खेलमा फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई ६-० गोल अन्तरले हराएको थियो । 
सन् १३ मे २०१४ मा जिरूलाई २०१४ फिफा विश्वकपमा खेल्ने अन्तिम खेलाडीको सुचिमा सुचिकृत गरियो । उनले खेलको पहिलो खेलमा उनी एक अतिरिक्त खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए जुन खल फ्रान्सले होन्डुरसको विरुद्धमा खेलको थियो । जिरूलाई त्यो खेल पछि फ्रान्सका पशिक्षकले स्विट्जरल्याण्ड विरुद्धमा प्रमुख खेलाडीको रूपमा राखेको थियो । त्यस खेलमा जिरूले १७ ‌औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । यो गोल उनको व्यक्तिगत पहिलो विश्वकप गोल र १०० औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो ।
सन् १० जुन, २०१६ मा युइएफए युरो २०१६ को पहिलो खेलमा फ्रान्सले रोमानीयालाई २-१ गोल अन्तरले जितेको थियो । जिरूले यस खेलमा फ्रान्सको लागि शुरु देखि अन्तिमसम्म खेल्ने खेलाडीको रूपमा ५० औँ उपस्थिति जनाएका थिए । फ्रान्सको अर्को खेलमा जिरूले ५७ औँ मिनेटमा हेडिङ गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । जिरूले क्वाटरफाइनल खेलमा पनि १ गोल गर्न सफल भएका थिए, जुन खेलमा फ्रान्सले आइसल्यान्ड विरुद्ध ५-१ गोल अन्तरले विजय हाँसिल गरेको थियो । युइएफए युरो २०१६ को फाइनल खेलमा फ्रान्स राष्ट्रिय टोली पोर्चुगलसँग हार्न पुगेको थियो । पूर्ण प्रतियोगिताको नतिजा आएपछि जिरू प्रतियोगिताकै सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा परेका थिए जहाँ उनले ३ गोल र २ सहायता गरेका थिए र उनले काश्य जुत्ता पनि जितेका थिए ।
जिरू धेरै आक्रमणकारी पदहरूमा खेल्ने क्षमता राख्छन्, तर सामान्यतया उनी एक अग्रपङ्क्ति वा केन्द्रिय अग्रपङ्क्तिको रूपमा खेल्ने गरेका छन् तथा उनी कहिले काँही एक दृतिय अग्रपङ्क्तिको रूपमा पनि खेलेको पाईन्छ । उनलाई कडाँ र दमदार स्ट्राइको रूपमा लिन सकिन्छ । उनी सामन्यतया अगाडि बढ्दै रक्षापङ्क्तिका खेलाडीहरूलाई भ्रममा पार्न माहिर छन् ।
जिरूको एउटा सानो भाइ छन् रोमेन, उनी पनि एक फुटबल खेलाडी हुन् । उनी लिग २ को फुटबल क्लब एक्सर एकेडेमीबाट खेल्दछन् र फ्रान्स राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि १५ वर्ष भन्दा कम वा १७ वर्ष भन्दा कम उमेरका खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
अद्यावधिक २९ सेप्टेम्बर २०२०
ग्रनोब्ल २००५–०६ लिग २ ६ ० ० ० ० ० — — ६ ०
२००६–०७ लिग २ १७ २ १ ० १ ० — — १९ २
इस्त्र (ऋण) २००७–०८ सम्पिओँना नास्सिओनाल ३३ १४ ० ० १ ० — — ३४ १४
तुर २००८–०९ लिग २ २३ ९ २ ४ १ ० — — २६ १३
२००९–१० लिग २ ३८ २१ १ ० २ २ — — ४१ २३
मोन्तपेलिए २०१०–११ लिग अँ ३७ १२ १ ० ३ १ २ १ — ४३ १४
२०११–१२ लिग अँ ३६ २१ ४ २ २ २ — — ४२ २५
२०१३–१४ प्रिमियर लिग ३६ १६ ५ ३ १ ० ९ ३ — ५१ २२
२०१४–१५ प्रिमियर लिग २७ १४ ५ ३ ० ० ३ १ १ १ ३६ १९
२०१५–१६ प्रिमियर लिग ३८ १६ ५ ३ २ ० ७ ५ १ ० ५३ २४
२०१६–१७ प्रिमियर लिग २९ १२ ४ २ १ ० ६ २ — ४० १६
२०१७–१८ प्रिमियर लिग १६ ४ ० ० ३ ० ६ ३ १ ० २६ ७
२०१८–१९ प्रिमियर लिग २७ २ १ ० ३ ० १४ ११ ० ० ४५ १३
२०१९–२० प्रिमियर लिग १८ ८ ३ १ ० ० ३ ० १ १ २५ १०
२०२०–२१ प्रिमियर लिग १ ० ० ० २ १ ० ० — ३ १
↑ कुपे दे फ्रँस, एफए कप सहित
↑ कुपे दे ला लिग र इएफएल कप सहित
↑ युएफा च्याम्पियन्स लिग र युएफा युरोपा लिग सहित
↑ एफए कम्युनिटी सिल्ड र युएफा सुपर कप सहित
राष्ट्रिय टोलीका लागि जनाएबो उपस्थितिहरूमा गरेका गोलहरू
फ्रान्स सन् २०११ २ ०
सन् २०१२ १२ २
सन् २०१३ १२ ३
सन् २०१४ ९ ४
सन् २०१५ १० ४
सन् २०१६ १४ ८
सन् २०१७ १० ८
सन् २०१८ १८ ४
सन् २०१९ १० ६
सन् २०२० ४ ३
२० जुन २०१४ इटिपाभ एरिना, साल्भाडोर, ब्राजिल ३२ स्विट्जरल्यान्ड १–० ५–२ २०१४ फिफा विश्वकप
२५ मार्च २०१६ आम्स्टरडम एरिना, आमस्टरडम, नेदरल्यान्ड ४६ नेदरल्यान्ड २–० ३–२
३ जुलाई २०१६ स्टेड डे फ्रान्स , सेन्ट-डेनिस, फ्रान्स ५३ आइसल्यान्ड १–० ५–२
१ सेप्टेम्बर २०१६ स्टेडियो सान निकोला, बरी, इटाली ५६ इटाली २–१ ३–१ मैत्रीपूर्ण खेल
९ जुन २०१७ फ्रेन्डस् एरिना , सोल्ना, स्विडेन ६३ स्विडेन १–० १–२ २०१८ फिफा विश्वकप छनौट
२३ मार्च २०१८ स्टेड डे फ्रान्स, सेन्ट-डेनिस, फ्रान्स ७० कोलोम्बिया १–० २–३
२८ मे २०१८ स्टेड डे फ्रान्स, सेन्ट-डेनिस, फ्रान्स ७२ आयरल्यान्ड १–० २–०
९ सेप्टेम्बर २०१८ स्टेड डे फ्रान्स, सेन्ट-डेनिस, फ्रान्स ८३ नेदरल्यान्ड २–१ २–१ २०१८-१८ युइएफए राष्ट्र लिग
22 March 2019 जिम्ब्रु रङ्गशाला, चिसिनाउ , माल्डोभा ८८ मोल्दोभा ३–० 4–1 २०२० युइएफए युरो कप छनोट
२५ मार्च २०१९ स्टेड डे फ्रान्स, सेन्ट-डेनिस, फ्रान्स ८९ आइसल्यान्ड २–० ४–०
लिग अँ: २०११-१२
लिग अँ सर्वाधिक गोलकर्ता : २०११-१२
राष्ट्रिय खेलाडीहरू लिग अँ का वर्ष खेलाडी : २०११-१२
↑ "Décret du 31 décembre 2018 portant promotion et nomination" [Decree of 31 December 2018 on promotion and appointment], Journal Officiel de la République Française (फ्रान्सेलीमा) 2019 (0001), १ जनवरी २०१९, PRER1835394D, मूलबाट १३ जुलाई २०१९-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २४ अगस्ट २०१९।
↑ "FIFA World Cup Russia 2018: List of players: France" (PDF), FIFA, १५ जुलाई २०१८, पृ: ११, मूलबाट २ डिसेम्बर २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ५ अक्टोबर २०१८।
↑ "Olivier Giroud", Chelsea F.C., मूलबाट ५ अक्टोबर २०१८-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ५ अक्टोबर २०१८।
↑ "लेवल र इस्त्र बिच भएको खेलको प्रतिवेदन", फुट-नेसनल, ११ अगस्ट २००७, अन्तिम पहुँच ५ फेब्रुअरी २०१२।
↑ "भेनेस र इस्त्र बिच भएको खेलको प्रतिवेदन", फुट-नेसनल, २५ अगस्ट २००७, अन्तिम पहुँच ५ फेब्रुअरी २०१२।
↑ "क्रिटल र इस्त्र बिच भएको खेलको प्रतिवेदन", फुट-नेसनल, १ सेप्टेम्बर २००७, अन्तिम पहुँच ५ फेब्रुअरी २०१२।
↑ "आर्लस एभिगनन र इस्त्र बिच भएको खेलको प्रतिवेदन", फुट-नेसनल, २२ सेप्टेम्बर २००७, अन्तिम पहुँच ५ फेब्रुअरी २०१२।
↑ "पाउ र इस्त्र बिच भएको खेलको प्रतिवेदन", फुट-नेसनल, ६ अक्टोबर २००७, अन्तिम पहुँच ५ फेब्रुअरी २०१२।
↑ हारे, जो (२ जुलाई २०१२), "जिरू आर्सनलसँग आबद्ध भएका छन्", लन्डन: द टेलिग्राफ, अन्तिम पहुँच २४ जनवरी २०१४।
↑ "जिरू आर्सनलमा आबद्ध भएका छन", आर्सनल फुटबल क्लब, मूलबाट २ सेप्टेम्बर २०१२-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २६ जुन २०१२। |deadurl= प्यारामिटर ग्रहण गरेन (सहायता)
↑ "वेस्ट ह्याम १–३ आर्सनल बिबिसी स्पोर्ट अभिगमन मिति ६ अक्टोबर २०१२
↑ ओर्नसटेन, डेभिड (१७ अगस्ट २०१३), "आर्सनल १–३ एस्टन भिल्ला", बिबिसी (बिबिसी स्पोर्ट), अन्तिम पहुँच ७ सेप्टेम्बर २०१३।
↑ मागोवन, एलिस्टर (१ सेप्टेम्बर २११३), "आर्सनल १–० टोटन्ह्याम हटस्पर", बिबिसी (बिबिसी स्पोर्ट), अन्तिम पहुँच ७ सेप्टेम्बर २०१३।
↑ "जिरू चेल्सीमा आबद्ध भएका छन्", चेल्सीको आधिकारिक वेबसाइट (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच ३१ जनवरी २०१८।
↑ "जिरूले चेल्सीलाई युरोपा लिगको नकआउट चरणमा प्रवेश गराय", एसबिएस (अङ्ग्रेजीenमा), अन्तिम पहुँच ९ नोभेम्बर २०१८।
↑ "सार्बाधिक गोलकर्ता जिरूले फ्रान्स राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा आवद्ध भएका छन्", फ्रान्स२४, ३ नोभेम्बर २०११, अन्तिम पहुँच ७ फेब्रुअरी २०१२।
↑ "कसरी आर्सनलका जिरूले रक्षपङ्क्तिका खेलाडीहरूलाई भ्रममा पार्दछन् ?", बिबिसी स्पोर्ट्स, २६ सेप्टेम्बर २०१३।
↑ सकरबेसमा Olivier Giroud
↑ "Olivier Giroud Bio, Stats, News", मूलबाट ५ सेप्टेम्बर २०१२-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ८ जनवरी २०१३।
↑ "Olivier Giroud", मूलबाट १९ अगस्ट २०१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १७ अगस्ट २०१४।
↑ "Giroud, Oliver", राष्ट्रिय फुटबल टोली, अन्तिम पहुँच १४ नोभेम्बर २०१५।
↑ "फ्रान्स – सर्बाधिक गोलकर्ता", आरएसएसएसएफ डटकम।
↑ "आधिकारिक सर्बाधिक गोलकर्ताको सुची: २००९–१० लिग अँ", लिग अँ डटकम।
विकिमिडिया कमन्समा ओलिभिए जिरू सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ओलिभिए_जिरू&oldid=1043343" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:५०, १६ नोभेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।